कोरोनाले सबैतिरको अर्थतन्त्र ध्वस्त, के हो जिडिपी, कसरी गरिन्छ मुल्याङ्कन ? - सिम्रिक खबर
कोरोनाले सबैतिरको अर्थतन्त्र ध्वस्त, के हो जिडिपी, कसरी गरिन्छ मुल्याङ्कन ?
भारतीय अर्थतन्त्र गत अप्रिलदेखि जुनको तीन महिनाको अवधिमा २३.९ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । कोरोनाभाइरस महामारीका कारण विगत ४० वर्षयता पहिलो पटक भारतीय अर्थतन्त्रमा यतिधेरै गिरावट आएको हो । भारतको राष्ट्रिय तथ्याँक कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको विवरणमा त्यस अवधिमा उपभोग्य मागमा कमी आउनुका साथै निजी लगानी समेत खुम्चिएको उल्लेख छ । कार्यालयको वक्तव्यमा व्यापार, होटल, यातायात र संचार क्षेत्रमा ४७ प्रतिशत गिरावट आएको तथा औद्योगिक उत्पादनमा करिब ३९.३ प्रतिशतले कमी आएको उल्लेख गरिएको छ ।साथै निर्माण क्षेत्रमा ५०.३ प्रतिशतले घट्नुका साथै खनिज उत्खनन २३.३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । विद्युत र ग्यास उत्पादन ७ प्रतिशतले घटेको छ । तर अनुकूल मौसमी परिस्थितिका कारण कृषि उत्पादन ३.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । भारत सरकार र भारतीय केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अर्बौं डलरको राहत प्याकेज, सुधार र व्याजदर कटौती गरेका छन् । हुनत, भारतको अर्थतन्त्र कोरोनाभाइरस महामारी शुरु हुनुअघि नै खुम्चिँदै गएको थियो । कोभिड–१९ शुरु हुनुअघि विगत ११ वर्षमा पहिलो पटक भारतीय अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ४.२ प्रतिशतमा ओर्लिएको थियो ।
विगत केही वर्षदेखि भारतको अर्थतन्त्र सुस्त भएको छ, तर पछिल्लो त्रैमासिकका यी तथ्यांकहरू विगत केही दशकहरूमा सबैभन्दा खराब आंकडा हुन सक्छन् । किनभने यस वर्ष अप्रिलदेखि जूनको अवधिमा, कोरोना भाइरसको फैलावट रोक्नको लागि देशभरमा लकडाउन लागू गरियो। खाद्यान्न र अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति बाहेक अन्य सबै आर्थिक गतिविधिहरू यस अवधिमा ठप्प छन्।आउने जीडीपी आंकडा सबैका लागि महत्वपूर्ण छ, किनकि भारतमा कोविड १९ महामारीको प्रकोप पछि तुरुन्त अर्थतन्त्रको सुस्तताको यो पहिलो आधिकारिक मान्यता हुनेछ। त्यसोभए सबैभन्दा पहिले जिडिपी आंकडा के हो त्यो बुझौ ।
के हो जिडिपी ?
कुल घरेलू उत्पादन जिडिपी भनेको एक बर्षमा देशमा उत्पादन हुने सबै वस्तु र सेवाहरूको कुल मूल्य हो। अनुसन्धान र रेटिंग्स फर्म केयर रेटिंग्सका अर्थशास्त्री सुशांत हेगडेका अनुसार जीडीपी ’विद्यार्थीको मार्कशीट’ जस्तै हो ।मार्कशीटले जसरी विद्यार्थीले वर्षभर प्रदर्शन गरेको र कुन विषयहरूमा ऊ कडा वा कमजोर रहेको देखाउँदछ। उही तरीकामा, जीडीपीले आर्थिक गतिविधिको स्तर देखाउँदछ र यसले कुन क्षेत्रहरू वृद्धि वा गिरावट आयो भन्ने कुरा पनि प्रष्ट पारिदिन्छ । यसले एकबर्षमा अर्थतन्त्र राम्रो वा नराम्रो कस्तो छ भन्ने देखाउछ । यदि जीडीपी तथ्यांकले सुस्तता देखायो भने यसको अर्थ देशको अर्थतन्त्र सुस्त हुँदै गइरहेको छ र गत वर्षको तुलनामा देशले पर्याप्त वस्तुको उत्पादन गर्न सकेन र सेवा क्षेत्र पनि घट्दो छ। भारतको केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले एक वर्षमा चार पटक जीडीपीको मूल्यांकन गर्दछ। अर्थात प्रत्येक तीन महिनामा जीडीपी मूल्यांकन गरिन्छ। प्रत्येक वर्ष यसले वार्षिक जीडीपी विकासको आंकडा जारी गर्दछ। यो विश्वास गरिएको छ कि भारतजस्तो कम र मध्यम आयको देशको लागि, बृद्धि भइरहेको जनसंख्याको आवश्यकताहरू पूरा गर्न प्रत्येक वर्ष उच्च जीडीपी वृद्धि हासिल गर्नु आवश्यक छ। जीडीपीले निर्धारित अवधिमा देशको आर्थिक बृद्धि र विकास देखाउँदछ।
यो कसरी मुल्याकंन गरिन्छ ?
जीडीपी चार महत्वपूर्ण कम्पोनेन्ट मार्फत मापन गरिएको छ। पहिलो तत्व खपत खर्च हो। यसले सामानहरू र सेवाहरू खरीद गर्नका लागि व्यक्तिहरूको कुल खर्चलाई जनाउँछ। दोस्रो, ’सरकारी खर्च’ तेस्रो ’लगानी खर्च’ हो र अन्ततः खुद निर्यात निर्यात हुन्छ। जीडीपी नोमिनल र वास्तविक सर्तमा मूल्यांकन गरिन्छ। नोमिनल सर्तमा यो वर्तमान मूल्यहरूमा सबै चीजहरू र सेवाहरूको मूल्य हो। जब आधार वर्षको सम्बन्धमा मुद्रास्फीति समायोजित हुन्छ, तब वास्तविक जीडीपी पाउँछौं। हामी सामान्यतया वास्तविक जीडीपी अर्थव्यवस्था को विकास को रूप मा विचार गर्दछौं। जीडीपीको डाटा आठ क्षेत्रहरु बाट संकलन गरिएको छ। यसमा कृषि, निर्माण, बिजुली, ग्यास आपूर्ति, खनिज, उत्खनन, वन र मत्स्यपालन, होटल, निर्माण, व्यापार र सञ्चार, वित्तिय, घर जग्गा र बीमा, व्यवसाय सेवाहरू र समुदाय, सामाजिक र सार्वजनिक सेवाहरू सामेल छन्।
किन यो सर्वसाधारणको लागि महत्वपूर्ण छ?
यो सर्वसाधारणको लागि महत्वपूर्ण छ किनकि यो सरकार र जनताका लागि निर्णाय गर्ने महत्वपूर्ण कारक हो। यदि जीडीपी बढ्दो छ भने यसको अर्थ यो हो कि देशले आर्थिक गतिविधिहरूको हिसाबले राम्रो काम गरिरहेको छ र सरकारी नीति जनस्तरमा प्रभावकारी साबित भइरहेको छ र देश सही दिशामा गइरहेको छ। यदि जीडीपी सुस्त भइरहेको छ वा नकारात्मक क्षेत्रमा जाँदै छ भने यसको अर्थ यो छ कि सरकारले अर्थव्यवस्थालाई सहि दिशामा फर्काउनका लागि नीतिहरूमा काम गर्नु आवश्यक छ। सरकार बाहेक, व्यापारीहरू, शेयर बजार लगानीकर्ताहरू र विभिन्न नीति निर्माताहरूले सही निर्णय लिनको लागि जीडीपी डाटा प्रयोग गर्छन्।जब अर्थव्यवस्था राम्रो प्रदर्शन गर्दछ, व्यापारीहरूले बढी पैसा लगानी गर्छन् र उत्पादन बढाउँछन् किनकि उनीहरू भविष्यका लागि आशावादी छन्। तर जब जीडीपी तथ्य राम्रो छ, सबैले आफ्नो पैसा बचत गर्न शुरू गर्दछन्। मानिसहरू कम पैसा खर्च गर्छन् र बढी लगानी गर्छन्। यसले थप आर्थिक बृद्धि गर्दछ। यस्तो अवस्थामा सरकारले बढी पैसा खर्च गर्ने अपेक्षा गरिन्छ। सरकारले विभिन्न योजनाहरूको माध्यमबाट व्यवसाय र मानिसहरूलाई अधिक पैसा दिन्छ ताकि तिनीहरूले यसको लागि पैसा खर्च गरे र यसरी आर्थिक बृद्धि गर्न सकून्। त्यस्तै, नीति निर्माताहरूले जीडीपी डाटाको प्रयोग गरी अर्थव्यवस्थामा सहयोग पु¥याउन नीतिहरू बनाउँदछन्। भविष्यको योजनाहरू बनाउन यो स्केलको रूपमा प्रयोग हुन्छ।
जीडीपी अझै पूरै तस्वीर होईन
यद्यपि अर्थतन्त्रको विकासको आकलन गर्न जीडीपीमा धेरै क्षेत्रहरू समेटिएका छन्। तर यसले अझै सबै कुरा समेट्दैन। विज्ञहरूले जीडीपी डाटाले असंगठित क्षेत्रको स्थिति प्रकट नगर्ने विश्वास राख्छन् । वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्राध्यापक अरुण कुमार भन्छन्, “जीडीपी डाटामा असंगठित क्षेत्र समावेश छैन, जुन देशको ९४ प्रतिशत रोजगारीमा पर्छ।“ अरुण कुमार भन्छन्, “यदि जीडीपी नकारात्मक क्षेत्रमा पर्यो भने यसको मतलब असंगठित क्षेत्रको प्रदर्शन संगठित क्षेत्रको भन्दा खराब छ।“ यस्तो अवस्थामा यदि जीडीपी वृद्धि १० देखि १५ प्रतिशतको नजिक छ भने यसको मतलब असंगठित क्षेत्रको वृद्धि २० देखि ३० प्रतिशतको बीचमा हुनेछ।सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, जीडीपी डाटाले कसरी संगठित क्षेत्रले प्रदर्शन गरिरहेको देखाउँदछ, तर यसले असंगठित क्षेत्रलाई पूर्णतया बेवास्ता गर्दछ, जसमा देशशको गरिब जनसंख्या समावेश पर्दछ। धेरै एजेन्सीहरू र विज्ञहरूले भनेका छन् कि २०२१–२२ मा भारतीय अर्थतन्त्र १५ प्रतिशतले कमजोर हुन सक्छ। भारतीय रिजर्व बैंकका गभर्नर शक्तिकान्त दासले भारतीय अर्थतन्त्र नकारात्मक क्षेत्रमा जाने बताउनुभएको छ। यद्यपि आरबीआईले जीडीपी कति घट्ने भनेर भनेका छैनन। ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा के हो भने भारतीय अर्थव्यवस्था विगत चार बर्षदेखि कमजोर भइरहेको छ।
२०१६–१७ मा जीडीपी ८.३ प्रतिशतले वृद्धि भयो। यस पछि, २०१७–१८ मा वृद्धि सात प्रतिशत थियो। यो २०१८–१९ मा ६.१ प्रतिशतमा र २०१९–२०मा ४.२ प्रतिशतमा झरेको छ।म्याकिन्सेले रिपोर्टमा भनेको छ, “कोभिड संकटले यो चुनौतीलाई बढाएको छ। भारतमा बृद्धि, आय र जीवनको गुणस्तर बृद्धि गर्न तुरुन्त कदम चालिएन भने एक दशक सम्म अर्थब्यबस्था स्थिरताको बाटोमा सक्छ।“ कोभिड महामारीले अवस्थालाई नराम्रो बनाएको छ र अर्थशास्त्रीहरूले भनेका छन कि भारतलाई अन्य एसियाली देशहरूको तुलनामा अझ बढी समय लाग्न सक्छ। बीबीसी हिन्दीबाट अनुवादित ।